မဟာသမယသုတ် အဓိဋ္ဌာန်ဝင်နည်း အစအဆုံး (မျှဝေခြင်းဖြင့် ကုသိုလ်ယူပါ) – Cele Cupid
Ever Best | November 5, 2020 | Knowledge | No Comments
သီလယူတာတော့ ကိုယ့်အစီအစဉ်အတိုင်းယူပါ မထည့်ထားဘူး။ (ပြန်လည်မျှဝေပေးပါသည်)
ဒီစာအုပ် က အပြင်မရှိ ပါဘူး ကိုဗစ်ကြောင့် ပစ္စည်းပြတ်နေတယ်၊ လှူချင်ရင်ကူးလှူပါ၊ ရောင်းခွင့်မပြုပါဘူး၊ Sar Oak Online ကိုပေးထားလို့ပါ။ ဆိုင်မှာကူးယူရင်လဲ (၁၅၀၀)နီးပါးကျသင့်ပါတယ်။ Viber အသုံးပြုတဲ့သူတွေကိုတော့ ပိုရအဆင်ပြေပါတယ် မရှိတဲ့ သူတွေ ကိုတော့ပို့လို့မရပါဘူး။ တစ်နေ့ (၉) ကြိမ် (၃)ခေါက်ခွဲပြီးပူဇော် မယ်ဆိုရင်မနက် နေ့လည် ည သုံး ချိန်ရွေးပါတယ်၊ အချိန် တိတိ ကျကျမ သတ်မှတ်ထားပါဘူး ကျနော်တို့က စားဝတ်နေရေး လူမှုရေး တခြားဘာသာ​ရေး ကိစ္စတွေရှိတယ်လေ. ဒါကြောင့်ပါ။
ပထမဆုံး သုံးကြိမ်မှာ သီလယူ စိန်ရောင်ခြည်ဘုရားပင့်ကနေ. စာမျက်နှာ (၂၁) အထိ ပရိကံပြုပြီးမဟာသမယသုတ် ရွတ်ဆိုပူဇော်ပါ၊ (၃၉) ထိပြီးတိုင်း စာမျက်နှာ (၄၃) ဆုတောင်း မင်္ဂလာပြုခြင်းကို ရွတ်ဆို ဆုတောင်းပါ။ ပြီးလျှင် ဒုတိယမြောက်ကို “ဧဝံ မေသုတံ ဧကံ သမယံ” မှစပြန်ပူဇော် ဆုတောင်း မင်္ဂလာပြုတဲ့အထိ စာပိုဒ်တွေပြီးတိုင်းပြီးတိုင်း သာဓုသုံးကြိမ်ခေါ်ပါ။ အဓိဋ္ဌာန်သစ္စာပြု စာမျက်နှာ ၁၆ မှ အပိုဒ် ၂ကိုမိမိကြိုက်နှစ်သက်သလို သစ္စာဆိုအဓိဋ္ဌာန်ပြုပါ။
၃ ခေါက်ရွတ်ဖတ်ပြီးရင်၃ခေါက်ပြီးတိုင်း စာမျက်နှာ ၄၅၊ နတ် နဂါးမေတ္တာပို့အကျဉ်း (သို့မဟုတ်) လုံးစုံများစွာသတ္တဝါ ဆိုတဲ့ မေတ္တာပို့နည်း ၁၁ နည်းဖြင့် ကြိုက်နှစ်သက်ရာ နှင့် မေတ္တာပို့ပါ။ စာမျက်နှာ ၄၇ အမျှဝေ (သို့မဟုတ်) ဤသို့ပြုရ မြတ်ပုညကိုကြီးထမြင့်ခေါင် တမျိုးမျိုးနဲ့ အမျှဝေပါ။ ပြီးစာမျက်နှာ ၄၉ နတ်ပို့ ပါဠိလေးတန်းကို ရွတ်ဖတ်ပြီး နားလို့ရပါပြီ။ ၃ ခေါက်ပြီးလို့ နောက်၃ခေါက် ပူဇော်မယ်ဆိုရင် နတ်ပင့် ပါဠိ သုံးကြောင်း အတိုလေးပင့် မေတ္တာသုတ် ပူဇော်ပြီး နောက် ၃ ခေါက်ဆက် ပူဇော်လို့ရပါပြီဗျာ။
မသိသေးသူများ မဟာသမယ သုတ်ပါဠိတွင် စာလုံးအနီနှင့်ရော ထားတာနတ်တွေ အမည်နာမ ပါ မိတ္တူကူးရင် အနီရောင်ပျောက်ပြီး ဂွင်း စ ဂွင်းပိတ် ကျန်နေပါလိမ့်မယ်။ စာလုံးအမှားမရှိအောင်အားလုံးပြန်စစ်ထားပါတယ် ဖတ်လို့ပြုလို့လွယ်အောင် စာတန်းများနဲနဲပြန်ချဲပေးထားပါတယ်။ အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေ။
စာအုပ်ဓါတ်ပုံများကို အောက်ပါလင့် တွင် ကူးယူသိမ်းဆည်းနိုင်ပါတယ်
နိုးနိုးကြားကြား ဖြစ်ချင်ရင် ပီကေဝါးပါ